China Indwangu Esindayo China Manufacturers & Suppliers & Factory
Indwangu Esindayo - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Indwangu Esindayo)
Indwangu eBrown Flower uJacquard Umbhalo Ogqokiwe yenziwe wakhiwa ngephethini efekethisiwe lapho izindwangu zihlanganiswa phakathi kwe-warp ne-weft. Amaphethini amahle ahlukahlukene anjengezimbali, izinyoni, izinhlanzi, izinambuzane nezilo, njll. Angalulwa kwiJacquard Textured Fabric. Izinto ezingavuthiwe...
Indwangu eluhlaza yendwangu eluhlaza okwesibhakabhaka eluhlaza
Indwangu yethu ye-Green Beaded Wedding lace Handwork Ford yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abaziwayo, ukuthi yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke ubuhlalu bethu bendwangu yomhlobiso wobuhlalu obuntofontofo buyanethezeka futhi buthambile. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa...
Indwangu yokugqokisa ingubo yokugibela ye-Orange Hand Beaded
Indwangu yethu ye-Orange Hand Beaded Embroidery Lace Face eyenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjeke ngesandla, ngakho-ke ukugqokwa kwezingubo zethu zokufakelwa kwesandla kuyanethezeka futhi kuthambile. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi,...
Indwangu Esindayo Yobunzima
Indwangu esindayo kaJacquard